Flubanserin HCL ntụ ntụ (147359-76-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Nwanyi eji / Flibanserin HCL ntụ ntụ
SKU: 147359-76-0. Categories: Nwanyi eji, Mmekọahụ Mmebi Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Flibanserin HCL powder (147359-76-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkọta mma.
Hydrochloride Flibanserin, nke e rere n'okpuru aha a na-akpọ Addyi, awụla dịka ihe ngwọta maka ụmụ nwanyị nwere Hypoactive Sexual Disord Disorder, akọwapụtara dịka "nkwụsị mmekọahụ ma ọ bụ na-adịghachi na-aga n'ihu (ma ọ bụ na-anọghị) agụụ mmekọahụ na ọchịchọ maka mmekọahụ" na nwoke ma ọ bụ nwanyị. A naghị aghọtacha usoro ihe omume.
Flibanserin hcl ntụ ntụ
aha: Flibanserin Hydrochloride
Molekụla Formula: C20H21F3N4O · CIH
Ọbara arọ: 344.49
Raw Flibanserin hcl uzu ojiji
A na-ere Hydrochloride Flibanserin (CAS 147359-76-0) n'okpuru aha aha "Addyi", Flibanserin Hcl.
Raw Flibanserin hcl ntụ ntụ Usage
100mg kwa ụbọchị na ụra.
Ịdọ aka ná ntị na Flibanserin hcl ntụ ntụ
Hydrochloride Flibanserin na-emetụta ụzọ ụbụrụ si arụ ọrụ site na itinye aka na ụbụrụ na-eme ka ụbụrụ ụbụrụ dị n'akụkụ ụbụrụ na-achịkwa ọchịchọ mmekọahụ na ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ. O nwere ike ime ka ọbara mgbali elu daa. Ndị ọrịa kwesịrị ịdina ala ma chọ enyemaka enyemaka ahụike ma ọ bụrụ na ha enwee nkụda mmụọ.
Mmiri mmiri mmiri na-eme ka mmiri mmiri dị na mmiri na-eme ka mmiri ghara ịdị. Ndị ọrịa kwesịrị izere ígwè ọrụ, ịkwọ ụgbọala, ma ọ bụ na-eme ihe ndị dị ize ndụ ndị ọzọ maka ọ dịkarịa ala 6hours mgbe ha gụsịrị mkpụrụ ọgwụ ọ bụla nke Flibanserin Hydrochloride.
Flubanserin Hydrochloride Powder (CAS 147359-76-0)
Min iji 100grams.
Raw Flibanserin hcl ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Flibanserin hcl (CAS 147359-76-0) si AASraw
1 nyochaa maka Flubanserin HCL ntụ ntụ
Flibanserin HCL ntụ ntụ bụ ihe ọmụma
Ihe na-eme Dutasteride